6B ကိုစွဲအင်တင်နာ, 18000-6B ကအင်းလေး, UCODE HSL(SL3 ICS30) အင်းလေး, 18000-6B ကိုစွဲအင်တင်နာအင်းလေး, UCODE HSL(SL3 ICS30) စွဲအင်တင်နာအင်းလေး
စွဲအင်တင်နာ 18000-6B ကိုစွဲအင်တင်နာအင်းလေး, 18000-6B ကအင်းလေး, UCODE HSL(SL3 ICS30) စွဲအင်တင်နာအင်းလေး, UCODE HSL(SL3 ICS30) အင်းလေး
ISO ကို 18000-6B protocol ကို, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 860 ~ 960MHz တီးဝိုင်း, ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသောကုဒ်.
chip: NXP ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30)
ပစ္စည်း: PET + အယ်လ်စွဲအင်တင်နာ
protocol စံ: ISO ကို 18000-6 type B
မှတ်ဉာဏ်: UID 64Bits(မှတ်ဉာဏ် bytes အတွက် 0-7), သာဖတ်ရန်
အသုံးပြုသူကို: 216bytes, R / W ကို
ESD: ± 1KV (HBM) လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ mode ကို(HBM) ESD ဗို့အားကိုယ်ခံစွမ်းအား
operating Mode ကို: မလှုပ်မရှားနေသော
ISO18000-6B အင်းလေးတစ် passive စမတ် tags များဖြစ်ပါသည်, ယင်းအီလက်ထရောနစ်တံဆိပ်၏ ISO18000-6B စံညီ, တံဆိပ်တစ်ခုတာဝေးပစ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဆန့်ကျင်တိုက်မှုယန္တရားရှိပါတယ်, အသိဉာဏ်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်,အဝေးပြေးလမ်းမကြီး (လမ်းတံတား), အီလက်ထရောနစ်သေဆုံးသူစုဆောင်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, ယာဉ်လိုင်စင်ပန်းကန်လုံခြုံရေးဖော်ထုတ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, မော်တော်ယာဉ် Marshall အချိန်ဇယားဆွဲစီမံခန့်ခွဲမှု, လယ်ပြင်၌စီမံခန့်ခွဲမှု၏အသိဉာဏ်ယာဉ်ရပ်နားစာရေး, entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ port ကို, စသည်တို့ကိုဆိပ်ကမ်းကိုကွန်တိန်နာစီမံခန့်ခွဲမှု.
အဆိုပါ ISO18000-6B tag ကို, 860 ~ 960MHz လှိုင်းနှုန်းသည် UHF တီးဝိုင်းထဲမှာ run နိုင်ပါတယ်, ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ် (100MHz bandwidth ကိုမှတက်, ဒေသတွင်းလှိုင်းနှုန်းသည် UHF tag ကိုအကြိမ်ရေရွေးချယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်,ရွေးချယ်ဖို့ဒေသဆိုင်ရာလှိုင်းနှုန်းသည် UHF tags များအကြိမ်ရေအချက်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, ဒေသခံဆက်သွယ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 900MHz အကြိမ်ရေမှားယွင်း applications များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စေဖို့), ၎င်း၏စက်အကြိမ်ရေ-ဖွယ်ရှိနေသည်ရရှိနိုင်ပါနှင့်သက်ရောက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းတီးဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူးကိုသုံးပါ,အရှင်အတူတူ tag ကိုခွင့်ပြုဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာဖတ်ရှုနိုင်သည်. Anti-တိုက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ Tags:, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးချနိုင်ပါသည်, ဖတ်ပြီးပြီ / လယ်ပြင် programmer များနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန် tag ကိုဖတ်ပြီးသားရေး / မြန်နှုန်းရေးရန်, သိပ်သည်းစာဖတ်သူကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် run နိုင်ပါတယ်.
ISO18000-6 နိုင်ငံတကာစံနှုန်း protocol ကိုသုံးပါ.
ထောက်ပံ့ရေးနှင့်စျေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ item, သိုလှောင်, ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း. ဆေးရွက်ကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး pallet, မှိုပြုပြင်ခြေရာခံခြင်း, ပိုပြီးကင်းလှည့်ရှာ, ရောက်ရှိကြောင်းစာရင်းသွင်းခြင်း, ကွန်တိန်နာဖော်ထုတ်ခြင်း,ကွန်ပျူတာကိုကူညီခဲ့ဆော့ဖျဝဲအင်ဂျင်နီယာခြေရာခံခြင်း.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် 18000-6B အင်းလေးစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို, UCODE HSL(SL3 ICS30) အင်းလေး